Nei The Channel Tunnel Zvichinyanya Kukosha For Europe? | Save A Train
musha > Travel Europe > Nei The Channel Tunnel Zvichinyanya Kukosha For Europe?
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 24/04/2020)
Isiri nguva refu pashure pokunge Channel Tunnel vakawanda vanotaura sezvo Eurostar Tunnel yakavhurwa 1994, zvakanga vaimudana mumwe Nomwe Wonders of Modern World. Maererano neAmerican Society of Civil Engineers, kuti zita zvakanga yakakodzerwa. It akaisa Channel Tunnel pakati mapurani zvinoshamisa kufanana Empire State Building uye CN Tower.
The Eurostar Tunnel Zvechokwadi zvinoshamisa uye hombe Feat okuvaka. Asi nei zvichikosha kuti Europe? Chii chakanga kwayo nezvainoita, uye izvo maguta vanogona Vafambi kusvika kushandisa? Ngatidyei Ukanyatsotarisa Channel Tunnel kukosha:
Kunyange zvazvo pakuvaka Channel Tunnel yakatanga 1988, kuti hazvirevi kuti pfungwa yaiva itsva. Kunyange Napoleon toyed pamwe pfungwa unobva England uye France Via mugero. pamberi pake, injiniya French Albert Mathieu-Favier wokutanga zvinganaka mumwe mugero kwakadaro 1802. Pfungwa yake yaisanganisira chitsuwa chakagadzirwa munzira, sebhiza-changed chiteshi. zvisinei, urongwa vakawanda yakasiyiwa kusvikira pashure peHondo Yenyika II.
mu 1987, ari parliaments of UK uye France pakupedzisira akabvuma kuvaka Channel Tunnel. Chirongwa zvaisanganisira kuvakwa tunnels matatu - maviri njanji motokari imwe basa mugero. The budiriro akatora makore matanhatu, $7.2 bhiriyoni, gumi Kuchifinha michina, uye 13,000 vashandi. mutengo Its kwakafanana yanhasi $12 bhiriyoni.
The Channel Tunnel iri 31.35 makiromita refu, pamwe chikamu pemvura kuti 23.5 zvemakiromita. Ndicho zvikuru zvakawanda Undersea chikamu munyika unomhanya 250 Ft pazasi gungwa mubhedha panguva yawo yakadzikira nguva. Mugero chinobatanidza Folkestone mu England pamwe Coquelles, Pas-de-Calais mu Furanzi. Ndezvemhuri pasi Chirungu Channel panguva Strait of Dover.
Chii chinoita Channel Tunnel chinokosha ndechokuti ndiye chete connector Mukuru Britain uye yakaoma Europe. uye pamwechete soro-nokukurumidza nezvitima iripo nhasi, zviri imwe uchitsanya nzira kuenda kubva UK kuti yakaoma Europe.
Kukanganiswa Akaputsa Channel Tunnel
The Eurostar Tunnel akabatanidzwa wakakura mukuita njanji kufamba svikika zvakare. Ivo kunyanya unoruonga muUK, sezvo zvaiita kuti kuenda Europe pasina ichibhururuka. Zvinobatsira vafambi kuderedza mari okufamba, uyewo avo kabhoni chavangayeukwa. Eurostar inofungidzira kuti vaifamba nechitima inongorira kubva kuLondon kuti Paris 90% zvishoma girinihausi gasi choutsi pane kutora ndege.
The yakanakisisa Chikamu pamusoro Channel Tunnel ndiye riine aro makuru European njanji network. kurishandisa, unokwanisa kuwana kumaguta kubva UK vakawanda zvikuru European. Uye ngatirege kukanganwa kuti Zvinogonekawo kusvika kumaguta makuru UK wakaita London pasina kubhururuka. Hazvina mukana wekuti, kutsanya uye yakachengeteka nzira kufamba.
London kuenda kuLyon Highsped Chitima
Kana Channel Tunnel fascinates iwe, kutora tasva kuburikidza nawo! The rwendo Varege yevedza, asi ayo nyaya yacho kurerukirwa. Kana uchida kuenda kana kubva muguta iri UK, bhuku rako chitima matikiti nhasi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fchannel-tunnel-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / ja kuti / von kana / nayo uye mimwe mitauro.
#channeltunnel #traveleurope europetravel eurostar eurotrip London longtrainjourneys trainjourney Tranride chitima mazano Train Travel chitima kufamba Mazano travelfrance
The Best Zvinhu Kuitira In London And How To Get There
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba UK
10 Most dzokubika Train Stations In Spain
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Spain